Misotro mololo Aluminum Foil Paper, Baomba Tape, hamindra Paperboard - Fancyco
PLA dia karazana fitaovana nampirina entana avy any fototra. Ny fiarovana ny sakafo dia ambony kokoa noho ny nentim-paharazana plastika fifandraisana. Mahazatra mampiasa plastika vokany dia tratrarina kokoa raha vokatra fampisehoana, 100% biodegradable sy miala. Na dia ampiasaina ho an'ny extrusion koronosy tsofina sarimihetsika, polylactic asidra dia afaka ny ho tonga lafatra resin. Tsy fiovana ara-nofo fotsiny, koa dia manome traikefa mpampiasa tsara kokoa ny vokatra, tsy tany amin'ny machining dingana ho ambany entona. Rehefa avy niala tamin'izany andro izany, koa nihaino ny hiarovana ny tontolo iainana.
Manana feno isan-karazany ny traikefa eo amin'ny fanondranana ny akora ho an'ny sigara, ao anatin'izany ny Aluminium foil taratasy, Acetate vohavoha, BOPP sarimihetsika, plug fanehoany taratasy ho an'ny sivana tehina, sigara wrapping taratasy, Inner endriny biraom ho an'ny sigara fonosana, Baomba kasety, ary Tipping taratasy.
Ny olana amin'ny plastika: 1,6 straws isan'olona isan-dayAmericans mampiasa ampy mamatotra eto an-tany manodidina ny 2.5 fotoana andro mandrakizay. Ny ankamaroan'izy ireo dia plastika straws.Ecosystem PollutionBecause ry zareo dia maivana, straws fomba mitsoka anaty rano, izay mitodi-doha avy ny ranomasina sy ny hanisy ratsy wildlife.Not Recyclable Non-biodegradablePlastic straws tsy azo amboarina. Tsy potipotika ka mandoto ny tany sy ny oceans.It ny fotoana Eco! Manokana izahay tamin'ny biodegradable diposables, anisan'izany ny fary bagasse tablewares, wheet sakafo fitoeran mololo toy ny kapoaka, clamshell, vilia baolina, lovia, vilia sy ny sisa sy fanary zavatra hafa ampiasaina amin'ny trano fisakafoanana, Mitsangantsangana sy ny antoko.
Fancyco hita tamin'ny 2004. Lasa ny orinasa mpamatsy volamena ao Alibaba ny 14 taona. Tena manan-danja Nanova tamin'ny taona 2005 izay manana ny orinasa manokana. Tamin'ny 2015 Fancyco soa aman-tsara niditra tao Nizeria sy Ouganda tsena ka nanangana No.1 marika ny taratasy taratasy sy ny fahadiovana vokatra any amin'ireo firenena ireo. Ankehitriny isika dia manokana ao amin'ny fonosana sy ny fanontam-pirinty fitaovana.